Cigna ကိုလူသတ်မှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်မသွားပါစေနှင့်။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2007 စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2007 Douglas Karr
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အနားယူပါ, Nataline ။
အကယ်၍ သင်သည်သက်သာခွင့်များကိုငြင်းပယ်ခံရခြင်း၊ အာမခံငွေပေးချေခြင်းတွင်လွဲချော်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှိခဲ့ဖူးသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကြားဖူးပါကသင်ကံကောင်းသူဖြစ်သည်။ အာမခံလုပ်ငန်းသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အကျိုးအမြတ်အရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ချာဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ သူတို့သေခွင့်ရလေလေအမြတ်လေလေဖြစ်တယ်။
ငါတို့အဲဒါကိုပြောင်းလဲလို့ရမလား အင်တာနက်နှင့် blogosphere? ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုမက်ဆေ့ခ်ျများဖြင့်ဗုံးကြဲနိုင်သလား Cigna စုပ်သည် နှင့်ခြားနားချက်စေ? သူတို့ကသူတို့ကဂရုစိုက်တတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှိတယ်။ အဲဒါမှန်ပါသလား ဂရုမစိုက်တာကတကယ်ကိုဂရုမစိုက်တာထက်ပိုကုန်ကျတယ်မဟုတ်လား။ ငါဆရာဝန်တွေဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အာမခံကုမ္ပဏီတွေကဆန့်ကျင်ဘက်မက်လုံးရှိတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်စာတွင်ဆရာဝန်လေး ဦး ကအာမခံကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အစားထိုးကုသမှုခံယူသောအလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိသောလူနာများသည် ၆ လခန့်ရှင်သန်နှုန်း ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Nataline Sarkisyan သေပြီ သုံးနှစ်ကြာသွေးကင်ဆာနှင့်သူမအာမခံကုမ္ပဏီ Cigna မှလိုအပ်သောအစားထိုးကုသမှုကိုငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒါကငါ့မျက်မှောက်၌ပထမ ဦး ဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု၏တိုတောင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်၏ အန္တရာယ်ကင်းသောအလုပ်ခွင်အခြေအနေများကြောင့်အလုပ်သမားရှုံးသောအလုပ်ရှင်ကိုသတ်ဖြတ်မှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောသေခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ Cigna သည်အခြေအနေကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမပြုခဲ့ပါ၊ ၎င်းတို့ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးလူနာအားသေစေရန်သတိပြုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဒီပုံပြင်တွေကငါကိုဒေါသထွက်စေပြီးထိတ်လန့်စေတယ်။ သငျသညျ Cigna သို့မဟုတ် Cigna ရောနှောနေတဲ့အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှာရှိတဲ့စတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးကိုမထောက်ပံ့ဖို့ငါတိုက်တွန်းလိမ့်မယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အိတ်ကပ်များကိုသူတို့ပေးဆပ်သောသူတို့၏အသွေးနှင့်မစီမံရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
Cigna က Nataline ကိုသတ်သည်
CIGNA အလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ - ညအချိန်တွင်သင်မည်သို့အိပ်သနည်း။
အိပ်ချ်အက်ဒွပ် HanwayCIGNA Corporation ဥက္ကCorporation္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊
မိုက်ကယ်ဒဗလျူဘဲလ်, အမှုဆောင်ဒုဥက္ကPresident္ဌနှင့်ဘဏ္Financialာရေးအရာရှိချုပ်၊ CIGNA Corporation
ဒါဝိဒ်သည်အမ် Cordaniသမ္မတ CIGNA HealthCare
ရှင်ပေါလုအီး Hartleyသမ္မတ CIGNA International
ယောဟနျသအမ် Murabito, အမှုဆောင်ဒုဥက္ကPresident္ဌ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ, CIGNA ကော်ပိုရေးရှင်း
Carol အန်း Petren, အမှုဆောင်ဒုဥက္ကPresident္ဌနှင့်အထွေထွေအကြံပေး, CIGNA ကော်ပိုရေးရှင်း
ကရင်အက်စ် RohanCIGNA Group မှအာမခံဥက္ကPresident္ဌ CIGNA သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသောအဖွဲ့
မိုက်ကယ် D. Woeller, အမှုဆောင်ဒုဥက္ကPresident္ဌနှင့်သတင်းအချက်အလက်အရာရှိချုပ်, CIGNA ကော်ပိုရေးရှင်း
Tags: စာရေးသူဒေတာကို Visualကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်Jascha Kaykas-WolffMindjetအဖှဲ့အစညျး
Big Switch နှင့် Bluelock
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 00 တွင်
Doug - မနေ့က "Sicko" ကို ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကြောက်စရာ။
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 03 တွင်
ကျွန်မအတွက် ကြောက်စရာအပိုင်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ - ဒီနိုင်ငံမှာ အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို သက်တမ်းရှည်စေမယ့် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေကို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အသက် သို့မဟုတ် သေကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော လုပ်ငန်းသည် တရားမဝင်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း။
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 21 တွင်
ဟုတ်တယ်၊ ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကြာပြီဗျ။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးသည် အနည်းငယ် ကမောက်ကမဖြစ်နေသည်- အလှူရှင်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုက မရရှိနိုင်သောကြောင့် အချို့သောလူများ သေဆုံးကြရပေသည်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်တို့မှာ ကိစ္စတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး သူမလက်မခံနိုင်ဘူး။
သို့မဟုတ် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ သူမတွင် ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော် သူမ၏ မိသားစု များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အရင်းအမြစ်များ မီးလောင်ပြီးနောက် လမ်းပေါ်၌ ခဲတံများ ရောင်းနေ ကြပေမည်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့မှာ အာမခံရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဒီပုံမှာ သေချာပေါက် တစ်ခုခုမှားနေပြီ...
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 11 တွင်
မင်းဒီမှာတွေ့ရတာ ကောင်းပါတယ်၊ မင်းအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လူနာတွေကို ဆရာဝန်နဲ့မဟုတ်ဘဲ အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့လူနာတွေကို ထားခဲ့ဖို့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဖိအားကို အသုံးချနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 48 တွင်
ပြဿနာမှာ ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများ၏ အဓိကအချက်မှာ အကျိုးခံစားခွင့်များကို မပေးဆောင်ခြင်းအပေါ် မူတည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့သား၏ဆေးကိုအတည်ပြုချက်ရယူရန်ကြိုးစားသောအခါငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာများ။ တိုက်ပွဲစတင်ချိန်တွင် 2004 ခုနှစ်တွင် ဖော်မြူလာမဟုတ်သော ဆေးဝါးဖြစ်သည့် Zyrtec-D ကို သူခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သည်။ ငါမလုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ADHD အတွက် တူညီသောဆေးကို ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ မိုင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ သူမဟုတ်ခဲ့ပါ။ Zyrtec-D ကို OTC အရောင်းအတွက် အတည်ပြုလိုက်သောအခါတွင် ၎င်းသည် ယခုနှစ်အထိ အတည်မပြုရသေးပါ။ တိုက်ဆိုင်မှု? သင်ဆုံးဖြတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လမ်းသည် ဤအရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသေးအဖွဲဖြစ်သော်လည်း နိယာမမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ သူတို့သည် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှုနှင့် ကုသစောင့်ရှောက်မှုကို ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏စိတ်တွင်၊ ဤမိန်းကလေးအတွက် နောက်ထပ်စျေးကြီးသော ကုသမှုများကို အတည်ပြုရန် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြသည်။ တောင်းဆိုချက်သည် တတ်သိနားလည်သူ တစ်ဦးဦးထံ ကနဦးရောက်ရှိခဲ့သည်ကို သံသယဖြစ်မိပါသည် (ဥပမာ အစာအိမ်ရောဂါဗေဒ ပညာရှင်မှ စိတ်ရောဂါကုဆေးများကို အတည်ပြုပေးသည့် ကျွန်ုပ်၏မှတ်စုများကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်သောကြောင့် လုံးဝမပြောရဘဲ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆရာဝန်လေးယောက်က အယူခံဝင်တာတောင် ငြင်းပါတယ်။
Michael Moore တွင် ဤအခွင့်အရေးများစွာရှိသည်- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လူနာ၏ဆရာဝန်မှလွဲ၍ အခြားမည်သူ၏လက်ထဲ၌ ချထားခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။ ပြီးတော့ Cigna မှာရှိတဲ့ 'ဆရာဝန်များ' လို့ ခေါ်တဲ့ အတွက် သူတို့ ငြင်းဆိုမှုတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Hippocratic ကျမ်းသစ္စာကို ဘယ်လို ညှိနှိုင်းကြမလဲလို့ မေးဖို့ လိုပါတယ်။
22:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 18 တွင်
အဆိုအရ Forbes မဂ္ဂဇင်းH Edward Hanway ၏ စုစုပေါင်းလျော်ကြေးမှာ $28.82 million ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ 5နှစ်သည် $78.31 million ဖြစ်သည်။ Hanway သည် Cigna (CI) ၏ CEO ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ6နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ 28 နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
အဲဒါကို သူက ညှိနှိုင်းတယ်။
25:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 21 တွင်
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်လူမျိုးအများစုဟာ ဆူပူ၊ မိုက်မဲပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေအကြောင်းဖတ်ပြီး ငါနဲ့ ငါ့မိသားစုအတွက် ဖြစ်မလာဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ "သူမ အက်ကွဲရာတွေထဲ ပြုတ်ကျသွားတယ်" ဒါမှမဟုတ် "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေသွားလိမ့်မယ်" ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အရေးပါမှုကို နှိမ့်ချဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာနယ်ဇင်းများသည် အာမခံကုမ္ပဏီများမှ စပွန်ဆာများကို ပေးဆောင်နေကြသောကြောင့် အာမခံကုမ္ပဏီများ၏ အပျက်သဘောနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကောင်းစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Natalines Death မတိုင်မီ လအနည်းငယ်အလိုတွင် John Stossel မှ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Michael Moores ရုပ်ရှင် Sicko ကဲ့သို့သော သတင်းထောက်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဒေါသထွက်လောက်အောင် ဒေါသထွက်ပြီး အမှန်တကယ် ဖုန်းခေါ်ဆို၍ စာများရေးသားကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေါသကို သိစေရန် ဤအလေ့အကျင့်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ မင်းရဲ့ဘောပင်၊ မင်းပါးစပ်နဲ့ မင်းရဲ့အိတ်ဆောင်စာအုပ်နဲ့ ပြောလိုက်ပါ။
သင်၏လွှတ်တော်အမတ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ မမှန်သောသတင်းထောက်များကို အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ဤသတင်းများတွင် ကြော်ငြာထားသော ကော်ပိုရေးရှင်းများကို သပိတ်မှောက်ရန် ဆက်သွယ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ပါ။
ဒီဇင်ဘာ 26, 2007 မှာ 9: 10 AM
ဤအရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အဖြေများထက် မေးခွန်းများ တိုးလာပါသည်။
ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှထဲက အစားထိုးကုသမှုခံယူရင် နောက်ထပ်ခြောက်လလောက် အသက်ရှင်နိုင်ပါသေးတယ်။ သေချာတာကတော့ သူမ ဒီထက် အများကြီး အသက်ရှည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူမမှာ terminal disease ရှိတယ်။
မိသားစုအတွက် ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့မီဒီယာတွေက ဖော်ပြချင်သလို ခြောက်သွေ့နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမ ဒီကုသမှုကို ခံယူပြီး နောက်ထပ် အနှစ် 20 လောက် အသက်ရှင်နေခဲ့ရင်... ဒါက ဉာဏ်မမီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအစားထိုးကုသမှုကို ခံယူရင်း၊ ငြင်းပယ်ခံရမယ့် ဆေးဝါးအချို့ကို လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်… သူမမှာ အားနည်းနေပြီး ခုခံအားစနစ်ကို ပိုဆိုးသွားစေမယ့်… ကင်ဆာကို ပိုပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျံ့နှံ့သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကင်ဆာက ပထမနေရာမှာပဲ ရပ်သွားတယ်။
ပြီးတော့ အခု ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။ ဒီတော့ သူတို့က ယုတ္တိမတန်ဘဲ နှိမ့်ချနိုင်တယ် ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တောင်းဆိုချက်က ဒေါ်လာနှစ်ရာပဲရှိတယ်… ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာ လှည့်ပတ်နေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းခြောက်လုံးနဲ့ မနီးပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာ 26, 2007 မှာ 9: 34 AM
ပျောက်နေတဲ့အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် အဓိကအချက်ကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုအချို့က ကုသမှုကို တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အာမခံကုမ္ပဏီက ဗီတိုအာဏာသုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။
မင်းရဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကံကောင်းပါစေ။ ကျွန်ုပ်သည် ဤနိုင်ငံရှိ 'အာမခံမရှိသူ' အများအပြားထဲမှ တဦးဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်သည် အဝလွန်နေပြီး ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် မရရှိနိုင်ပါ။ (ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒဖြင့် အကျုံးဝင်သည်)။
ဒီဇင်ဘာ 26, 2007 မှာ 10: 16 AM
အာမခံကုမ္ပဏီတွေကို ယုံကြည်သလောက် ဆရာဝန်တွေကို ယုံတယ်။
မင်းရဲ့အိတ်ကပ်တွေကို လှေကြီးတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် အရာတစ်ခုခုကို လုပ်နိုင်စွမ်းကို တောင်းဆိုမှာလား။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ငြင်းဆိုထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ပြင်ပခုံသမာဓိလူကြီးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်
A. မိသားစု၏ စိတ်ခံစားမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
B. သူတို့ရဲ့ အဓိကအချက်က လွှမ်းမိုးမှု မခံရပါဘူး (အာမခံနဲ့ ဆရာဝန်တွေအတွက်ပါ)
ထိုမျှလောက်များသော ဆရာဝန်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြင့် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ universal health care ကို ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ ပြောမလား။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 12 တွင်
ဆရာဝန်အနည်းစုကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ကို ဘယ်လိုထိခိုက်သွားလဲဆိုတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ်ဦးသည် လူနာတစ်ဦးစီနှင့် သူ၏ 'ကုန်ထုတ်စွမ်းအား' မြှင့်တင်ရန် 'အချိန်နည်းသည်' ကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ သူ့လစာရဲ့ 1/3 ကို အကျင့်ပျက်အာမခံ (အခြားအမြတ်အစွန်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်း) မှာ သုံးစွဲခဲ့တာကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။
သူသည် အာမခံစာရွက်စာတန်းကို အမှီလိုက်ရန် နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့် သူ့ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်မှုထက် ဆရာဝန်အဖွဲ့နှင့် ပါ၀င်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထူးချွန်သော ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့ လှိုဏ်ခေါင်းထဲသို့ထည့်ရန် မထိုက်တန်သောကြောင့် ၎င်းမှာ နှလုံးကြေကွဲစရာဖြစ်သည်။
ဆရာဝန်အများစုဟာ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေမဟုတ်သလို သူတို့ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို စွန့်ခွာနေကြသူတွေလည်း တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှုပ်နေတာပဲ။
ကျွန်ုပ်သည် ကနေဒါတွင် ၆ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အမှန်တကယ် ပံ့ပိုးပေးသည် (ကျွန်ုပ်၏ ရှေးရိုးစွဲကြီးပြင်းလာမှု၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ)။ အကြောင်းပြချက်က ရိုးရှင်းပါတယ် – ဆေးဝါးဟာ စီးပွားရေးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ လူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်… US မှာ အဲဒါကို BOOMING လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ထားပေမယ့်။
ကနေဒါမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် ဝန်ခံပါတယ်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကြားနေရသော ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းများသည် အနည်းငယ်သာ၍များသည်။
လူတိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် – လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို စတင်ဖို့ မကြောက်ကြပါဘူး။ လူတို့သည် ဆိုးရွားသောအလုပ်များမှ နုတ်ထွက်ရန် မကြောက်ကြတော့ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
စင်စစ်တော့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလို့ ထင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အာမခံ CEO တစ်ယောက်ကို တစ်နှစ် $28 million ပေးချေနိုင်ရင်၊ streamlining အချို့အတွက် အခွင့်အလမ်းရှိမှာလား။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 17 တွင်
မဟုတ်ဘူး သင့်ဝင်ငွေရဲ့ 33% ကို အာမခံအတွက် အစိုးရကို ပေးနေတာတွေ့ရင်… ရှေ့ကို ဆက်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေအတိုင်းပဲ… ဆေးအာမခံအပြည့် (အရမ်းကောင်းတယ်) တစ်လကို $250 လောက်ပေးရတယ်။ အလုပ်ရှင်က လစာပိုပေးပေမယ့်။ ဒါပေမယ့် ဒါက developer တွေကို အလုပ်ခန့်ခြင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 28 တွင်
အထေ့အငေါ့ကတော့ ငါတို့က အဲဒါကို ပေးနေပြီ၊ ck. အာမခံမထားသည့်သူတစ်ဦးအား ကုသမှုခံယူသည့်အခါ၊ ၎င်းအတွက် အခွန်အခများနှင့် တိုးမြှင့်ထားသော ဆေးနှုန်းထားများ စသည်တို့ဖြင့် ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် universal health care အတွက် ပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်သည်... သို့သော် ၎င်းသည် ကုသခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည် - ကာကွယ်ရေးဆေးမဟုတ်ပါ။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 24 တွင်
Nataline သည် အစားထိုးကုသမှုဖြင့် ခြောက်လရှိလိမ့်မည်ဟူသော မင်းထင်မြင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ — မမှန်ပါ။ အစားထိုးမကုသဘဲနဲ့ အပြင်မှာ ခြောက်လလောက် အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှုသည် သွေးကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသော အသည်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမသည် အစားထိုးကုသမှုကိုခံယူခဲ့လျှင် သူမသည် အပြည့်အဝအသက်ရှင်ရန် အလားအလာရှိသည်။ အဲဒါမရှိရင် သူမ ဆုံးပါးသွားပါပြီ။
ဆရာဝန်တွေ ဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အခါ စနစ်က လုံးဝပျက်သွားတယ်။ သူတို့ကို မယုံရင် အာမခံသူ၊ လူနာကို ကျေနပ်စေပြီး အာမခံတာဝန်ယူမှု အန္တရာယ်တွေကိုလည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေတဲ့ ခုခံကာကွယ်ဆေးကို လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
စနစ်အား ပြုပြင်ခြင်းသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ဆုများနှင့် အကြောင်းပြချက်များကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ အာမခံသူများ၏ အမြတ်ငွေများကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် ဆရာဝန်အဖြစ် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ဒေါ်လာ 100K ကျော် ပေးဆောင်ခဲ့သော ဆေးဝါးအလေ့အကျင့်များကို လက်ထဲပြန်အပ်ခြင်းဟု ဆိုလိုပါသည်။ မတူညီသောရှုထောင့်အတွက် ဆရာဝန်များ၊ ငွေနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဒေါက်တာ Kirschenbaum ၏စီးရီးကို သင်အမှန်တကယ်ဖတ်ရှုသင့်သည်။ ဤနေရာတွင်စတင်ပါ.
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 58 တွင်
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိသမျှက အသည်းအစားထိုးကုသမှုအတွက် ပန်းတိုင်က နောက်ထပ်ခြောက်လအထိ အသက်ရှင်ဖို့ ၆၅% အခွင့်အလမ်းကို ညွှန်ပြနေသလိုပဲ။
အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ ကနဦး ပို့စ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါက နောက်ထပ် အနှစ် 20 လောက် ရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုရင်… ဒါပေမယ့် ခြောက်လလောက်ကြာရင်... ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက် ခုန်တက်လိုက်ဆင်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှ ခုံသမာဓိလူကြီးသည် မှန်ကန်သော အဖြေတစ်ခုဟု ထင်လိမ့်မည်။
အဲဒါတွေက ပြသနာတွေဖြစ်နေချိန်မှာ၊ ဖြေရှင်းချက်က universal health care လို့ မထင်ပါဘူး၊ အဲဒါက ငါတို့အစိုးရကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရုံနဲ့ သူတို့က စုတ်ပြတ်သတ်နေတာ။
သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ပြုပြင်မှုသည်... အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းများကို ကန့်သတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဟီလာရီ ကလင်တန်လို ကျန်းမာရေး အာမခံ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကျွန်တော် အတိအကျ မထားပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်၏အခွန်ငွေကို သုံးစွဲရသည့် ပြဿနာများနှင့် လုံလောက်သော ပြဿနာများ ရှိနေသည်... နှာခေါင်းအလုပ်များကဲ့သို့ 'ကျန်းမာရေးပြဿနာများ' အတွက် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 07 တွင်
Associated Press မှ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက် http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1UCLA မှဆရာဝန်များသည် "… အစားထိုးကုသမှုခံယူသော Nataline နှင့်ဆင်တူသောအခြေအနေများတွင်လူနာများသည်ခြောက်လရှင်သန်နှုန်း 65 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်" ဟုဖော်ပြထားသည်။
ဆိုလိုချင်တာက သူမဟာ ပထမ 65 လမှာ အသက်ရှင်ဖို့6ရာခိုင်နှုန်း အခွင့်အလမ်းရှိမှာ မဟုတ်ဘဲ သင်မှတ်သားထားသလိုပဲ၊ သူမဟာ6လမှာ သေရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ သူမသည် သွေးကင်ဆာအတွက် ကုသမှုခံယူခြင်းကြောင့် အသည်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် နောက်ဆုံးရောဂါတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နားလည်တာက သူမ ၆ လလောက်လုပ်ထားရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုရှည်အောင်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတိုင်း ရလိမ့်မယ် ။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ တတ်နိုင်သူတွေသာ ရသင့်တယ်လို့ မင်းရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ရိုးရိုးသားသား ပေါ်လွင်နေပုံရပြီး တခြားလူတိုင်း သေရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ အကြံပြုချက်တော်တော်များများကို ငါသဘောတူတယ်။ အထူးသဖြင့် လျင်မြန်တယ်ဆိုရင်တော့ တတိယအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခုံသမာဓိက ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဥာဏ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် "သူမကို သေစေနိုင်ပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူသွားတော့မယ်" ဆိုတဲ့ အယူအဆက စိတ်ဓာတ်ကျသလို ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်သာ စိတ်ဝင်စားပြီး အခြားမည်သူမျှ မရှိသည်ကို ခံစားရစေသည်။
26:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 18 တွင်
လူတိုင်းလူတိုင်း နေထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး အာမခံကို ရစေချင်ပေမယ့် အစိုးရက ပေးဆောင်ရမယ့် နေရာလို့ မထင်ပါဘူး။
အစိုးရ (ဥပမာ- IRS အနုတ်) ထက် အများကြီးပိုနည်းတာကို မြင်ချင်ပါတယ်။
ငါတို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်တွေကရော ဘယ်လိုထင်လဲ။ အဖြေမှာ ဆရာဝန်များအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရန် (ဆိုလိုသည်မှာ ဥပဒေနှင့်လျော်ညီသော) ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို အခွန်ဆောင်သူတိုင်းထံ မရွှေ့မပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည် သူ့ကိုယ်သူ ညံ့ဖျင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘဝကိုလည်း မယုံကြည်သင့်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် တာဝန်ရှိသည်နှင့်အမျှ ဤကဲ့သို့သော ကိစ္စများသည် ပို၍အဖြစ်များလာလိမ့်မည်၊ မနည်းတော့ပါ။ ကင်ဆာရောဂါရှိသူတွေရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ ကင်ဆာရောဂါရှင်တွေရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဆေးက ပိုထိရောက်တယ်။
ဒါပေမယ့် လက်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိစ္စအတိုင်း၊ ထပ်ပြောပါရစေ.. အစားထိုး ကုသပြီးရင် အသက်ရှည်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမယ် ဆိုရင်... အားလုံးပဲ ပြီးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဆိုးမြင်နည်းနဲ့ ထောက်ပြထားတဲ့ ကြေညာချက်ကို ကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်။
ကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်စတိုင် ဆောင်းပါးလေးပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာ လွယ်ကူသောအကြောင်းအရာမဟုတ်ပေ၊ အဖြစ်မှန်တွေချည်းပါပဲ မေမေ။
ဇန်နဝါရီ 10, 2008 မှာ 1: 35 AM
အဖြစ်မှန်များသည်ရိုးရှင်းသည်၊ Cigna သည်ဖျားနာမှုကိုကုသရန်အသုံးမချချင်ပါ၊ Cigna Glendale သည်ဤမိသားစုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ တတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်၊ အစိုးရအေဂျင်စီများသည်ဤလူများကိုစားသုံးသူအားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကိုရှာဖွေရန်မှသာ၊ ပြီးပါပြီ။ ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဗလင်စီယာမှ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ် ရေးသည်- ၁၉၉၆ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ကော်ပိုရေးရှင်း ဌာနသို့ စာတစ်စောင် ရေးခဲ့သည်။ Jo Joshua Godfrey ထံပေးသောစာမိတ္တူ။
လေးစားအပ်ပါသော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်၊
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ လိုင်စင်ရ HMO၊CIGNA ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပြင်းထန်သောအခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကျွန်ုပ်၏မဲဆန္ဒနယ်မြေ Josephine Joshua Godfrey ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်စာရေးနေပါသည်။
Mrs Godfrey သည် CIGNA မှသူမ၏အဆုတ်ကင်ဆာကို မတ်လ 1993 မှ 1994 ခုနှစ်သြဂုတ်လမှ 1993 ခုနှစ်အထိ မှန်ကန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကုသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် Cigna ဆရာဝန်များသည်သူမ၏ဘယ်ဘက်အဆုတ်ရှိ Carcinoid အကျိတ်ကို အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Mrs Godfrey သည် အကျိတ်ကို XNUMX ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ရောဂါရှာဖွေသင့်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ CIGNA မှ အကျိတ်များရှိကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း၊ အကျိတ်ကို နောက်ဆုံးတွင် ST တွင် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Burbank California ရှိ Josephs ဆေးရုံ။ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ရောဂါဗေဒအရ အကျိတ်သည် “အပြည့်အဝကြီးထွား… အပြည့်အ၀ ရင့်ကျက်နေပြီဟု အစီရင်ခံသည်။
GIGNA မှ မစ္စစ် Godfrey က ဆေးကုသမှုခံယူရန် အထူးကုထံ အကြိမ်ကြိမ် ပေးပို့ရန် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ နားမလည်နိုင်သော အကြောင်းပြချက်အချို့အတွက် GIGNA သည် သင့်လျော်သောဆေးကုသမှုအတွက် အထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ CIGNA သည် မစ္စစ် Godfrey ၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို ထုတ်ပြန်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး အခြားဆရာဝန်က သူမ၏ ဆေးမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကုသမှုကို မှာကြားနိုင်သည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ တောင်းဆိုပြီးမှသာ မှတ်တမ်းတွေ ထွက်လာတယ်။ သို့တိုင်၊ မစ္စစ် Godfrey သည် CIGNA ကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများကို မနာလိုစွာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် HMOS တွင် စာရင်းသွင်းထားသော စားသုံးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ HMOS တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံသား 12 သန်းကျော်သည် HMOS နှင့် ပတ်သက်၍ စားသုံးသူများအား ပညာပေးရန်နှင့် အသိပေးရန် ပြည်နယ် လိုအပ်ပါသည်။ HMOS ရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံသား XNUMX သန်းကျော်သည် သုံးစွဲသူများအား အရည်အသွေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရေးအကြောင်း ပညာပေးခြင်းနှင့် အသိပေးခြင်းသည် အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Mrs Godfreys အတွေ့အကြုံသည် စားသုံးသူများ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို HMOS မှ မည်သို့ကုသပေးနေသည်ကို ညွှန်ပြနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စီမံခန့်ခွဲထားသော စောင့်ရှောက်မှုစနစ်အား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရပါမည်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် HMOS နှင့် ၎င်းတို့ပေးဆောင်သော ဆေးကုသမှု အရည်အသွေးကို စတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်အတွက် လူနာများစွာသည် HMOS သည် လူနာများအတွက် စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အချက်အလက်များကို ပုံမှန်ငြင်းပယ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ HMO မှ မလွန်ကဲသော ကုသမှုကို သမားတော်များအား အကြံပြုခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည့် ထင်ရှားသော "gag rule" သည် အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် HMO နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည့် တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။
(1) San Diego မှ Ruth Macinnes သည် HMO သမားတော်များ နှလုံးရောဂါရှာဖွေကုသရန်နှင့် cardiogenic shock ပေါ်ပေါက်လာမှုကို တုံ့ပြန်ရန် ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုများ ပျက်ကွက်သောအခါ သေဆုံးခဲ့သည်; (2) Will Spense of Los Angeles သည် Hodgkins lymphoma မဟုတ်သောကင်ဆာကြောင့် သူ့ဘဝအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ - ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဒီလိုလူတွေလိုပဲ နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ တခြားထောင်ပေါင်းများစွာသော ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်ကြားတယ်။
သင့်ရုံးသည် ဤတောင်းဆိုချက်များကို စစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံတော်၏ HMOS ကို မှန်ကန်စွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုသေချာစေရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စားသုံးသူများအား ပေးဆောင်ခြင်း ရှိ၊ မစ္စစ် Godfrey ဟာ သူမကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်တဲ့ စနစ်တစ်ခုက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဖောက်ဖျက်မှုများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပါက စားသုံးသူများအား နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို အရေးယူပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုသည် HMO သုံးစွဲသူ 12 သန်းကျော်အတွက် နိုင်ငံတော်က ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အစောဆုံးအခွင့်အရေးဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ခရိုင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Armando E. Araloza အား ကျေးဇူးပြု၍ တုံ့ပြန်ပါ။
Los Angeles, CA အကြောင်းပြန် »
JO JOSHUA GODFREY သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်နှင့် ဤနိုင်ငံမှလူများနှင့် မျှဝေသည်-
ကော်ပိုရေးရှင်းများဌာနမှ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက် နေ့စွဲပါ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်များ စာပြန်စာ
RE : ALPHA ဖိုင်မရှိပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ် Cigna Healthcare of California နှင့် ပတ်သက်သည့် ဇွန်လ 30၊ 1996 တွင် လက်ခံရရှိသော သင်၏ မေလ 4၊ 1996 ပေးစာအား ကျွန်ုပ် လက်ခံရရှိပါသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းများဌာန (?Department?) သည် Knox-Keene Health Care Service Plan Act (Health and Safety Code 1340 et seq) အောက်တွင် Cigna Healthcare နှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို ထိန်းကျောင်းပေးပါသည်။ ။) ဌာနသည် ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသော အကူအညီ (?RFA?) တောင်းခံမှုတိုင်းကို အလေးထားပါသည်။ ဌာနမှရရှိသော RFA များကို တစ်ဦးချင်းပြဿနာ(များ) နှင့် စပ်လျဉ်း၍သာမက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စနစ်ကျသော ပြဿနာများကိုပါ ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။ RFA သုံးသပ်ချက်သည် ဌာန၏ အလုံးစုံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အားထုတ်မှုများ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဌာနသည် Godfrey မိသားစုမှ တင်ပြသော RFA အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါသည်။ Josephine Godfrey ၏အမှုကို Department's Enforcement Division မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အစီအစဉ်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ Godfrey မိသားစုနှင့် အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပါဝင်သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိပါ။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ Cigna သည် မစ္စစ် Godfrey? ၏ သီးခြားတိုင်ကြားချက်များကို ကျေနပ်စွာဖြေရှင်းခဲ့ပြီး အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် ဗျူဟာများဖန်တီးထားကြောင်း၊
Christopher Godfrey ၏ RFA နှင့် ပတ်သက်၍ Cigna သည် မစ္စတာ နှင့် မစ္စစ် Godfrey နှစ်ဦးစလုံးအတွက် RN ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဒီ RFA နှစ်ခုစလုံးကို အခုပိတ်ထားတယ်။ သို့သော်၊ ဤနှင့် RFA များအားလုံးရှိ အချက်အလက်များကို Knox-Keene အက်ဥပဒေနှင့်အညီ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကို လိုက်နာမှုရှိစေရန်အတွက် ဌာန၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ဌာနသည် ?gag? ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ စာချုပ်များတွင် အပိုဒ်များ။ မကြာသေးမီက ဌာနသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အစီအစဉ်ကို ကောင်းစွာအလင်းတွင်ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည့် ၎င်း၏ပံ့ပိုးပေးသူစာချုပ်များတွင် အပိုဒ်တစ်ခုကို ဖျက်ရန် အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူအားလုံးထံ မကြာသေးမီက ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်၊ ဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်မှာ-?စာချုပ်ချုပ်သည့်သမားတော်နှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တစ်ဦးစီသည် လူနာတစ်ဦး၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျမှန်ကန်စွာပြောဆိုနိုင်သင့်သည် လူနာနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်ကြားတွင် ယုံကြည်မှု ရှိပါသလား။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေမှာ စာရင်းသွင်းထားတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံသား သန်းပေါင်းများစွာအပေါ် ဌာနရဲ့ကတိကဝတ်ကို ထပ်ပြီး အလေးပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ သင့်တွင် ထပ်လောင်းမေးခွန်းများရှိပါက အထူးလက်ထောက် (အမည်ချန်ထားပါသည်) ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။
ဇန်နဝါရီ 10, 2008 မှာ 1: 42 AM
ကျွန်ုပ်အသက် 14 နှစ်တွင် ဥပဒေပြုအမတ်များထံ ဤဇာတ်လမ်းကို ရေးခဲ့ပြီး မျှဝေလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသက် 14 နှစ်ဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ သားကောင်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားခံရသူတွေကို ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ကွန်ဂရက်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်ကို စာရေးနေပါတယ်။ ဖျားတယ်၊ ခေါင်းကိုက်တယ်၊ အမေက ဆရာဝန်ဆီ ခေါ်သွားတယ်။ မကြာခဏ နှာခေါင်းသွေးထွက်ပြီး ခေါင်းကိုက်တာ ဆိုးပါတယ်။ ၁၉၉၂ နှစ်ကုန် သို့မဟုတ် ၁၉၉၃ အစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောကြပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်နှင့် အမေအတွက် အလွန်အနစ်နာခံကြောင်း မှတ်မိပါသည်။ သူမ ဒီအကြောင်းကိုတောင် မပြောချင်ဘူး။ ကျွန်မ ခေါင်းထဲမှာ အကုန်ပါနေတယ် လို့ ပြောတယ်။ ၁၉၉၃ နဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ကောင်းမွန်တဲ့နှစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မပျော်ဘူး။ အမေက အမြဲဖျားတယ်၊ အမြဲတမ်း ချောင်းဆိုးတယ်၊ CIGNA မှာ ဆေးသွားသောက်တယ်၊ အမြဲတမ်း ပင်ပန်းတယ်။ အမေက အမေနဲ့ ထပ်တူမကျတော့ဘူး။ ခေါင်းတွေ တအားနာပြီး အမေ ဘယ်လောက်တောင် ဖျားနေလဲဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ပင်ပန်းနေတော့ အမေ့ကို မနှောင့်ယှက်ဘူး။ သူမသည် အမြဲတမ်း စိတ်ဓာတ်ကျနေကာ အမြဲတမ်း ငိုနေကာ အမြဲတမ်း စိတ်ဓာတ်ကျကာ ချောင်းဆိုးတတ်သည်။ ညဘက်ဆို ပါးစပ်ပိတ်ထားဖို့ အော်ဟစ်ပြီး အားလုံးကို နှိုးထားတယ်၊ အခုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
1994 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ဓာတ်ကျကာ ခေါင်းကိုက်ကာ ဆေးသေတ္တာအတွင်းမှ ဆေးများကို သောက်ခဲ့သည်၊ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် အမေနေမကောင်းသဖြင့် သတိတောင်မထားမိပါ။ အချိန်ပိုကြာပြီး တစ်နေ့မှာ အမေက ကျွန်မကို နှိုးဖို့ ဝင်လာပြီး အိပ်ရာက မထနိုင်၊ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ ငါ့အမေက ဒါပဲ ဝတ်လိုက်။ ငါတို့ချက်ချင်း CIGNA ကိုသွားမယ်။ ငါအဲဒီကိုသွားပြီး CIGNA ဆရာဝန်တွေက ငါ့ကိုတွေ့တယ်။ သူတို့က ကျွန်မကို စိတ်ကျန်းမာရေးဌာနကို ပို့ပြီး အဲဒီနှစ်နေရာက ကျွန်မဘာလုပ်ခဲ့မှန်းတောင် မသိပါဘူး။ အမေက ကျွန်မကို လမ်းလျှောက်ပြီး ကြော်ငြာလုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြောပြတယ်။ အဲဒီနေ့ နှောင်းပိုင်းမှာ သူသေရင် ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲလို့ ပြောခဲ့တယ်။ မေမေက အရမ်းပင်ပန်းနေလို့ ငိုတာ လုံလုံလောက်လောက် မလုပ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်တယ်။ ဒါကို ထပ်မလုပ်ဖို့ အမေက ကတိပေးထားတယ်။ အမေက CIGNA ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ ကြိုးစားတာကို မတွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီး သူတို့ဟာ ဘယ်လို ဆရာဝန်မျိုးလဲလို့ မေးပါတယ်။ မေမေက အရမ်းအော်ငိုပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပေးဖို့ သဘောတူကြတယ်။ မတ်လအစောပိုင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကျွန်မတို့က ခေါင်းကို စကင်န်လုပ်ဖို့ သဘောတူကြတယ်။ အဲဒါက နှစ်လခွဲလောက်ကြာပြီး တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစကင်န်လုပ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်အကှေ့ကို ဆေးကြောဖို့လိုတယ်၊ အမေက အရေးတကြီးလုပ်ရမလားလို့ မေးတော့ ဆရာဝန်က အရေးပေါ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေတယ်။ အမေက နွေရာသီ အားလပ်ရက်မှာ လုပ်မယ်လို့ ပြောတယ်။
မေလကနေ သြဂုတ်လအထိ အမေက အရမ်းဖျားတယ်။ သူမဟာ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ၆ပတ်ကြာ မသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လလယ်မှာ ကျွန်တော့်အမေက အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီး သေတော့မယ်လို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အမေက ဒါကိုပြောတော့ အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ ဩဂုတ်လအစတွင် အမေသည် ကျွန်ုပ်အား အိုင်ယာလန်သို့ တစ်လကြာ အဘိုးအဘွားများထံ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ်လကုန်တွင် အိုင်ယာလန်မှ ကျွန်ုပ်ပြန်ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ CIGNA သည် ကျွန်ုပ်၏မိခင်အား ဓာတ်မှန်ရိုက်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်မှာ ၂ ပတ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူမမှာ အဲဒါတွေကို အခုမှရထားပြီး သူမမှာ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။ အမေ ခွဲစိတ်ပြီး အဆုတ်ရဲ့ 6% ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူမတွင် ကင်ဆာအကြိတ်ရှိခဲ့သည်။ မေမေ ဆေးရုံတက်တုန်းက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ကျွန်မရဲ့ မိထွေးက နေမကောင်းဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ CIGNA သည် ကျွန်ုပ်၏ မိထွေး၏ မှတ်တမ်းများကို ၂ ပတ်ကြာ ထုတ်ပြန်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြင်ပဆရာဝန်ထံသွားသောအခါ၊ CIGNA သည် သူ့ကို ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက် ကုသပေးနေသည်။ သူ့မှာ အရမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ COPD ရောဂါရှိပြီး ဘယ်ဘက်အဆုတ်မှာ ကျွန်တော့်အမေလိုပဲ တစ်ခုခုရှိနေတယ်။
ငါတို့သွားပြီးတော့ ငါတို့မိသားစုအားလုံးအတွက် မှတ်တမ်းတွေရခဲ့တယ်။ ကျွန်​​တော်​တို့ ကျွန်​​တော့်​ကို​တွေ့ပြီး အပြင်​ဆရာဝန်​ဆီ သွား​ရောက်​သွား​တော့ အပြင်​မှာ ဆရာဝန်​သွား​တော့မှ တကယ့်​ဆရာဝန်​နဲ့ CIGNA ဆရာဝန်​တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်​က ဘာလဲဆိုတာ အခု​တော့ သိလိုက်​ရတယ်​လို့ ကျွန်​​တော်​​မျှော်​လင့်​ပါတယ်​ တစ်​​နေ့ကျရင်​ ဒီ​လောက်​​ပြောပြမယ်​။ . ကျွန်တော့်မှာ အရိုးပျက်စီးနေပြီး အရိုးပတ်လမ်းကြောင်းကို တွန်းထုတ်နေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်မျက်လုံးကို တွန်းထုတ်လိုက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငါ Cedar-Sinai မှာ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။ CIGNA က ငါတို့ကို လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက် တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက် 1995 က 1993 ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပဒေတွေကို ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ ဒီလိုထပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ CIGNA သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုကို ယနေ့တိုင် နှိပ်စက်နေပါသည်။ သူတို့က ငါ့အမေကို နာရီနဲ့ချီပြီး ငိုအောင်လုပ်ပြီး မင်းကို ဒီအကြောင်း အားလုံးကို ပြောပြခွင့်ပေးမယ်လို့ ငါမျှော်လင့်တယ်။ ငါ့မိဘတွေသေရင် ငါဘယ်သွားရမလဲ၊ ငါ့အစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ CIGNA လည်း သိသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ကြီးပြင်းလာသောအခါ ဤနေရာတွင် မနေချင်တော့ပါ။ လူတွေက ကြင်နာတတ်တဲ့ နေရာကို ရွှေ့ချင်တယ်။ အိုင်ယာလန်ကိုပြောင်းမယ်။
အခု ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ လူလိမ်များနှင့် လူလိမ်သမားများသည် ဤကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် မိသားစုတိုင်းအတွက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါသည်။
CIGNA GLENDALE ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မတ်လ 11, 2008 မှာ 2: 58 AM
သက်သေခံချက် အထက်လွှတ်တော် စည်းမျဥ်းများ ကော်မတီ ကြားနာခြင်း ပြည်နယ် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် မေလ ၁၂ ရက်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် တနင်္လာနေ့ နေ့လည် ၂း၀၃ နာရီ
ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကို မင်းကို ဝေမျှဖို့ ငါလာခဲ့တယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများဌာနသည် ၎င်း၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ပျက်ကွက်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ မိသားစုများ အတွေ့အကြုံက ယင်းကို သရုပ်ဖော်ပါသည်။ ထို့အပြင် Cigna Healthcare နှင့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည် စားသုံးသူများကို မည်သို့အလွဲသုံးစားလုပ်ထားကြောင်းနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းဌာနများက မျက်ကွယ်ပြုထားပုံတို့ကို သရုပ်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
Cigna နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည် ကျွန်ုပ်၏မိဘများကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှစတင်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ဖန် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တိုင်းအပေါ်တွင် ယင်းအလွဲသုံးစားမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ငါဖျားနာပြီး သမားတော်လိုအပ်တဲ့အခါ သူတို့က ငါ့ကို ချိန်းထားသလို လိုက်ပို့ပေးတယ်၊ အများစုက ငါ့ကို လာပို့တဲ့ သမားတော်တွေက ငါ့ကို မမျှော်လင့်ထားတာကြောင့် အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Cigna သည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဆေးကုသမှုအတွက် ပေးဆောင်မည်ဟုဆိုကာ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။ သူတို့က ဒါကို တစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတော့ ဆေးကုသစရိတ်ကို မပေးဘဲ၊ ငွေမရှင်းရင် တရားစွဲမယ်လို့ စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီတွေက ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ Santa Barbara တွင် ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော ဆရာဝန်ကို ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း Cigna မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် မည်သည့်အခါမှ ဖြစ်မလာပါ။ Cigna သည် ကျွန်ုပ်အား Santa Barbara တွင် dostor တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ထားသော်လည်း ကျွန်ုပ်နေမကောင်း၍ ရက်ချိန်းယူလိုသောအခါတွင် ဆရာဝန်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းပြန်မခေါ်တော့ပါ။ ဆရာဝန်များရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းသောအခါတွင်၊ Cigna သည် အထူးကုများ လိုအပ်သည့်အခါတွင် Cigna နှင့် အဆင်မပြေတော့ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် အထူးဂရုစိုက်မှု လိုအပ်ပြီး ခွဲစိတ်မှုအတွင်း ဆရာဝန်က ကျွန်ုပ်သည် Biopsy လိုအပ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူသည် အလယ်တွင်ရပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ရန် CIGNA ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှစ်ခုသည် ဆက်စပ်နေပြီး ဆေးဝါးကို ဤနည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် တစ်ခါမျှ မမျှော်လင့်ထားကြောင်း ဆရာဝန်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးမှာ Cigna က ဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်းဌာနကို တိုင်ကြားတဲ့အခါ ဆရာဝန်က မှားတယ်လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ဆရာဝန်မှ Santa Barbara ရှိ ၎င်း၏ ဥပဒေပြုအမတ်ထံ ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းက ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Biopsy ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ မှတ်တမ်းမှာ မှန်ပါသည်။ ဆရာဝန်က ကင်ဆာမဖြစ်ခင် ရက်ပေါင်း 90 တိုင်း စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Cigna က ကျွန်ုပ်သည် ဤအထူးစောင့်ရှောက်မှုကို လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်လိုအပ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မူလပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်အား ကောင်တီတစ်ခုတည်းတွင်ပင်မဟုတ်ဘဲ Santa Maria ရှိ မူလစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ကာ တစ်နာရီထက်ပို၍ ငါ့နေအိမ်မှ
ကျွန်ုပ်သည် UC Santa Barbara သို့သွားသော ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမရှိပါ။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီမည့်အစား ကော်ပိုရေးရှင်းများဌာနမှ ကျွန်ုပ်အား နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းကို ဟန့်တားခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော Cigna မှ ပုဂ္ဂိုလ်အား ကျွန်ုပ်အား ထပ်မံခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။
မေလ 12, 2008 မှာ 8: 38 pm တွင်
မကြာသေးမီက ယူနိုက်တက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီသည် CIGNA သို့ ပြောင်းလာခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်၏ကျောပေါ်တွင် MRI ရိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး DR.s အတွင်းရေးမှူး CIGNA မှ မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် အလွန်ဆိုးရွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုရန်5ရက်အချိန်ယူခဲ့ရသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်သည် စာသားအတိုင်း တောင်းရမ်းပြီးမှသာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတည်ပြုလျှင်ပင် ကျွန်ုပ်အား မကြာခဏ လှည့်ပတ်ကာ ၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု ဆိုကာ ငြင်းဆိုကာ ငွေတောင်းခံလွှာတွင် ကပ်နေပါသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိထားသော၊ ကျွန်ုပ်၏ PCP သို့သွားမည့်အစား အနာဂတ်တွင် အဆုတ်၊ နှလုံး၊ နောက်ကျော သို့မဟုတ် အရိုးပြဿနာများအတွက် "သူတို့ သူနာပြု" ဟုခေါ်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိ ကြည့်ရှုရန် CIGNA tonite မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ဖုန်းနဲ့တွေ့ရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့ကိုပြောပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမဟာ ကမ်းလှမ်းမှုမှာ ခုန်မချဘဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တွင် အသက်7နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော CIGNA သည် ဂရုမစိုက်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် အနာဂတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများကို လုံးဝကြောက်လန့်နေပုံရပါသည်။ CIGNA သည် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှမရရှိသောကြောင့် ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ သည်းခံ!!!! ဒါကို 1 ပတ်အတွင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလိုက်ရတယ်!!!!!!!!!!!
1:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 18
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ins အဖြစ် cigna နှင့် အဓိကလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အလုပ်မှာ ကျောရိုးကျိုးသွားတယ် အလုပ်မှာ နာရီထိုးတယ်။ ဒီကြိုးကွင်းမန်နေဂျာက “အလုပ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောတယ်!!
ငါ cigna မှတဆင့် "ရေရှည်မသန်စွမ်းမှု" ၏ ins ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ - cigna က ကျွန်မကို cigna က သူတို့ကြားချင်တာကို ပြောပြတဲ့ ကာယကုထုံးဆရာဆီ ပို့ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် အကူအညီမပါဘဲ ပက်လက်အိပ်ပြီး ဝင်ငွေလည်းမရှိ နာကျင်နေရတယ်။ ဘယ်သူက အဖြေရှိပြီး ဘယ်သူက ဖုန်းနံပါတ်လိုချင်လဲ ၊ ငါက ဘောက်ချာကြီးတဲ့ သူတွေမို့ ဖုန်းခေါ်ဖို့ နံပါတ်တွေဆွဲရမယ် ၊ ကောင်လေးက ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရှိလား မကူညီဘူး !
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ လျှောက်ထားတဲ့သူတွေအတွက် ဖင်ကိုနမ်းပါ၊ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် မင်းရဲ့နာကျင်မှုနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်
7:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 14
ကျွန်တော့်အမေ ဆုံးပါးသွားတာ 11 နှစ်ရှိပြီ Cigna က Flu နဲ့ ဆေးရုံတက်တုန်းက သူရခဲ့တဲ့ အာမခံပါ။ ဆေးရုံမှာ ခဏလေးကြာပြီး ပိုဆိုးလာပေမယ့် ကုသမှုပိုကောင်းလာမဲ့အစား ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီကနေ Cigna က ပိုက်ဆံမပေးရတဲ့အတွက် အိမ်ပြန်ရမယ်လို့ အမေနဲ့ကျွန်မကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမနေနိုင်တော့ဘူး။ Cigna ဆေးရုံက ဆင်းချိန်မှာ အမေက အသက် 55 နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဆေးမှတ်တမ်းကြောင့် သိခဲ့ရသည့် Cigna သည် အမေ အူထဲတွင် အူပိတ်နေခဲ့သော ဆေးရုံသို့ ပေးချေရသည့် မည်သည့်ငွေကိုမဆို ၎င်းတို့ထံ ပို့ပေးရသောကြောင့် အူလမ်းကြောင်းမှ သွေးထွက်၍ မရတော့ပေ။ ကုသမှုအတွက် အခကြေးငွေမယူတော့ဘူးလို့ Cigna က ပြောတဲ့အခါ သူ့ဘာသာသူ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အမေက အဲဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပဲ ER မှာ နေမကောင်းဖြစ်လို့ သွေးမဆောင်နိုင်တော့ဘဲ သေတော့မယ်လို့ ICU မှာ တင်ထားရပြီး အူထဲမှာ အူတွေပိတ်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ သူမမှာ ခွဲစိတ်မှုလိုပေမယ့် မကြာခင်မှာဘဲ သူမမှာထိုင်နေတဲ့ အူလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနီးပါး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပြီး အမေက သူမမှာရှိနေတာကို မသိပေမယ့် Cigna က သူ့ကို ဆေးရုံက နှင်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်မပြည့်ခင်7ရက်အကြာ 18 ရက်မပြည့်ခင်မှာ အသက်ကယ်ဆယ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိလို့ အမေ့ကို အသက်ကယ်ဆယ်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ် ဆေးရုံကထွက်လာတယ်။ ပိုက်ဆံ ဒါမှမဟုတ် အာမခံချက်မှန်မှ အမေ့ကို အသက်ဆက်ရှင်စေမယ့် CIGNA HMO ရှိတာကြောင့် ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ မင်းက ကြိုက်သလိုခေါ်ပေမယ့် လူသတ်မှုလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ 21 နှစ်ကြာတော့ သူတို့လက်ထဲမှာ တခြားဘယ်နှစ်ယောက်သေလဲလို့ တွေးနေတုန်းပါပဲ။
ဇွန် 21, 2009 မှာ 3: 10 pm တွင်
cigna ၏လက်ချက်ဖြင့်ခံစားခဲ့ရသော Jo Joshua Godfrey သည် United Patients Of America ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။